दशैँ किनमेलले गोरखा बजारमा भिडभाड - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : २३ आश्विन २०७८, शनिबार १०:४३
चाडबाड नजिकिएसँगै गोरखा बजारमा भिडभाड सुरु भएको छ । अन्य समयमा भन्दा अहिले मानिसको चाप किराना, फेन्सी, मसला पसल र बित्तिय संस्थामा बढेको छ । शनिवार बन्द हुने पसलहरु दशैँ लागेसगैँ खुल्न थालेका छन् ।
गोरखाको ग्रामिण भेगका सबै रुटमा सवारी साधन चल्न थालेको छ । ग्रामिण रुपमा चल्ने यात्रुबाहक बस खचाखच हुन थालेको छ । दशैँका लागि किनमेल गर्न बजार आउने र सदरमुकामबाट गाउँ फर्कनेहरुको संख्या बढेको छ । टिकट काउन्टरमा बिहानैदेखि सर्वसाधारणको भिड हुन थालेको छ ।
गोरखा सदरमुकामको मसला तथा किराना पसलमा पनि ग्राकको लर्को छ । दशैँका लागि मरमसला किन्नेहरुको लाईन छ । मसलमा गत वर्षभन्दा मूल्य बढेको गुनासो ग्राहकको छ । ब्यवशायीले भने थोरै नाफा राखेर सहुलियतमा बिक्री गरेको बताउने गरेका छन् ।
खाने तेलमा अत्याधिक मूल्य बढेको छ ।
एक लिटर खाने तेलको तीन सय २० रुपैयाँ सम्म तिर्नुपरेको गुनासो सर्वसाधारणको छ । चिनीमा पनि मूल्य बढेको छ । चामल, चिउरा लगायत खाद्यान्नमा मूल्य बढेको छ । हरियो तरकारीमा पनि मूल्य बढेको छ । किराना पसलहरुमा ग्राहकले देखिने गरी मूल्यसुची छैन ।
गोरखाका फेन्सी पसलहरुमा पनि मानिसको भिड छ ।
दशैँमा नयाँ लुगा किन्ने प्रचलन छ । बालवालिकाको लागि नयाँ लुगा अनिवार्य जस्तै हो । गोरखाका फेन्सी पसलहरुमा आफुखुसी दररेट छ । कुन लुगाको मूल्य कती भन्ने यकिन नै छैन । ग्राहक हेरेर ब्यापारीले मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छन । जिल्ला अनुगमन समितिले फेन्सी पसलहरुलाई पनि दररेट कायम गर्न भनेको छ ।
घरेलु कार्यालयले केहीदिन यता बजार अनुगमन गर्दै आएको छ । गोरखा सदरमुकामको किराना, फेन्सी, मासु पसल लगायतको अनुगमन गरिएको घरेलु कार्यालयका प्रमुख सुर्य भुजेलले बताए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको टोलीले बजार अनुगमन गर्दै आएका छन् ।
गोरखा बजारका पसलम मूल्य बढी लिने गरेको, म्याद नाघेको खाद्यान्न भेटिएको, केही पसल दर्ता नबिकरण नभएका भेटिएको छ । त्यस्ता पसलहरुलाई तत्काल दर्ता गर्न निर्देशन गरिएको घरेलु कार्यालयका प्रमुख भुजेलले बताए ।